Inethiwekhi ye-LAN 192.168.8.100 yi-IP. Abantu abaninzi abayifumani indlela yokungena kwi-Intanethi ye-WIFI engenazingcingo. Unokuzama ukucofa kwikhonkco: https://192.168.8.100 ungene kwi-interface yomlawuli. Ukuba awukwazi ukuncamathisela, ungabhekisa kuhlelo lokungena ngemvume lokulawula umzila. Ukuba ukhohliwe amagama akho abasebenzisi kunye neephasiwedi, jonga nje ileyibhile okanye incwadana yomgaqo.
Ukusetyenziswa kwedilesi ye-IP 192.168.8.100, ukuyisebenzisa njani?
Okokuqala, khuthaza ubuchwephesha obabelwanayo ngeedilesi ze-IP. Iidilesi ze-IP zahlulwe zaziindidi ezi-5 zeABCDE, phakathi kwazo kudla ngokusetyenziswa iABC. Phakathi kweentlobo ezi-3 zeedilesi, icandelo elinye ligciniwe, kwaye iipakethi ezi needilesi azinakusetyenziswa. Ngokukhawuleza isasazeka kumnatha, i-IP yidilesi egcinwe kwiidilesi zeklasi ye-C, zihlala zisetyenziswa kwiinethiwekhi ze-LAN, imaski engagqibekanga ye-C yedilesi yeklasi eyi-255.255.255.0, icacisa ukuba idilesi yeklasi engu-C inokuhlala ii-IPs ezingama-256 Ngokucacileyo, kunye nenye ummeli womnatha, kukho nommeli omnye othumelayo. Kuphela ngama-254 anokuchongwa kumsebenzisi. Umzekelo, umsebenzisi we-IP womnatha 192.168.1.0 usenokuba uvela ku-1-254. Unxibelelwano phakathi kwabo alufuni kuhamba ngomzila. Ngqo iifayile zingahanjiswa.
Ukuthi, umbono wale dilesi ye-IP ubanzi kakhulu. Njengoko iyidilesi egciniweyo, ibonisa ukuba inokusetyenziswa nakwi-LAN nayo. Ngokwesiqhelo, isetyenziswa njenge-IP yomsebenzisi, njenge-IP yimantissa ye .1 ihlala igcinelwe indlela yokungena, ke 192.168.1.2-192.168.1.254 inikwe umsebenzisi. Ukuba kwi-LAN kukho iserver ye-DHCP, unokucwangcisa iqela le-IP ukuba libe ngu-192.168.1.2-192.168.1.254. Eli nqaku limisela ngokuzenzekelayo idilesi ye-IP yomsebenzisi.
Into eyahlukileyo zii-routers ezingenazingcingo eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwezi ntsuku. Ngokwesiqhelo, izibuko le-IP LAN lolu hlobo lwesixhobo zihlala zine-mantissa ye .1. Kuyacetyiswa ukuba abathengi batshintshe i-IP ye-LAN port ukuya kwidilesi eyongezelelweyo, ukuze abanye abathengi bangaqashi. Ndwendwela ii-IP ezingenazingcingo ze-LAN port, umzekelo, i-IP lukhetho olukhulu. Ngokucacileyo, i-IP yezibuko le-IP inokucwangciswa nayo, akukho mfuneko yokuba ukhethe i-IP usebenzisa icandelo lokuqala lenethiwekhi. I-IP yamacandelo othungelwano ahlukeneyo afihliwe kwaye akhuselekile; Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukutshintsha indlela yokungena yomsebenzisi iye kwinto ehambelanayo, kungenjalo ayizukukwazi ukudibanisa kwinethiwekhi.
Zimbalwa iifemu ezincinci okanye izikolo ikakhulu ezicela ukuseta ngaphandle kwedilesi ye-IP, kunye nokusebenzisa okulandelayo ukusasazwa kwe-IP ukusebenzisa yonke ifemu okanye inkqubo yesikolo ukufikelela kumnatha. Idilesi ye-IP esetyenziswe ngoomatshini bezo zikolo okanye amashishini yi-IP ye-intranet.
Kufuneka ikhankanywe ukuba ii-PC zenethiwekhi zangaphakathi zingathumela izicelo zonxibelelwano kwezinye ii-PC kumnatha, ii-PC ezahlukeneyo kwi-Intanethi azinakho ukuthumela izicelo zokuqhagamshela kwii-PC kuthungelwano lwangaphakathi ngenxa yomncedisi we-FTP kuthungelwano lwangaphandle.